Waa maxay Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
July 13, 2019 0 comments 1012
Shabakadaha bulshada ayaa ah maalinba maalinta ugu dhow dadka badankood, sidaa darteed, waxay u shaqeeyaan sida wargeysyo aan horey u seegi karin subax kasta. Iyo kororkan kaabayaasha bulshada ayaa soo ifbaxay Instagram mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo xilligan la isticmaalo. Dareenkan iyo sida kuwa kale oo badan, waxaad la yaabi doontaa waxa Instagram tahay waana wax iska caadi ah inaad leedahay shakikan aadna rabto inaad waxbadan ka ogaato.
Taasi waa sababta aan kuugu tusin doono hoosta macluumaad badan taas waxaad u baahan tahay inaad ogaato haddii aad ku cusubtahay adeegsiga codsigan, sida, haddii aad waqti haysatid laakiin aad rabto inaad waxbadan ka barato Instagram.
Barta bulshada ee Instagram
Sida ku xusan cinwaanka waa shabakad bulsho, codsi mobiil ah oo loo heli karo macruufka iyo Android, illaa bog haddii loo isticmaalo kumbuyuutar. Waxaa sidoo kale loo sii daayay dadweynaha 2010 ay sameeyeen hal abuurayaashu Kevin Systrom y Mike Krieger, guusheedii ayaa noqotay mid soo laab laabtay oo ay lahayd in kabadan 100 milyan oo isticmaaleyaal ah oo si firfircoon ugu shaqeynayay 2012 iyo in kabadan 300 milyan oo loogu talagalay 2014. Sidaas awgeed, taxanahan dhab ahaantii wuxuu soo jiitay dareenka Mark zuckerberg oo go'aansaday inuu iibsado wax ka badan 2012.
Asal ahaan Instagram waxaa loo sameeyay iPhone, sidaa darteed nidaamka ka sarreeya 3.0.2 ayaa diyaar u ah iPad iyo iPod. Iyo Android oo leh noocyo ka sarreeya 4.0. Qaabkaan ayuu dalabka u suurtagaliyay inuu gaaro 900 milyan oo adeegsadeyaal firfircoon, tiradaana way sii kordheysaa bil kasta.
Shaqeynta Instagram waa inaad soo geliso sawirro, sawirro iyo fiidyowyo. Intaa waxaa dheer waxay u ogolaataa adeegsadeyaasheeda inay isticmaalaan saameynta sawirrada sida daahyada, miirayaasha, aasaaska hoose ee galka weelka, midabada hore, isu ekaanta kuleylka isla mar ahaantaana markaad dhammeyso tafatirka waxaad ku shubi kartaa waxa ku jira shabakadda bulshada ama meelaha kale sida Facebook, Tumblr iyo Twitter.
Codsigan wuxuu hayaa astaamo u gooni ah oo sax ah in la siiyo muuqaal muuqaal ah sawirro iyadoo lagu sharfayo kamaradaha Kodak Instamatic iyo Polaroid. Dareenkan, cabirka saamiga 16: 9 iyo 4: 3 waa midka ilaaliya isbarbardhiga.
Ka dib waxaan dib u eegi doonaa wax yar oo ku saabsan miirayaasha ee uu arjigaan leeyahay taasna waxay tixraacaysaa inay qaateen Polaroid.
Juno: Waxay u oggolaanaysaa codad diiran inay u soo baxaan iyagoo ku daraya codadka qabow mid cagaar ah oo u caddeeya inay caddaan u dhalaalaan.
Hurdo-hurdo: Waxay bixisaa muuqaal hurdo leh, muuqaal gadaal ah, jajabinta sawirka iyo ku darida ciriiriga iyadoo xoogga la saarayo madow iyo buluug.
Lug: Awoodda bluukhyada iyo cagaarka, qurxinta qurxinta iyo muuqaalka muuqaalka ah muuqaalka nolosha.
Aaden: Waxay bixisaa muuqaal dabiici ah oo buluug iyo cagaar ah.
Crema: Kuleyli oo ku qabooji sawirka leh muuqaal kareem leh.
Joogtada ah: Waa fikradaha sawirrada tan iyo markii ay ku darsan tahay muuqaal pastel.
Amaro: Adeegso diirad saar xarunta si aad iftiinka ugu darto sawirka.
Kacsan: Iyadoo bixineysa iftiinka maaddada ee mawduuca, wuxuu ku darayaa nooc dhalaalaya sawirka.
Sierra: Wuxuu muuqaal muuqaal ah oo jilicsan u muujiyaa sawirka.
Sutro: Kordhinta fikradaha sidoo kale hadhyada si muuqata, iyagoo diirada saaraya midabada guduudka iyo bunni iyo gubashada geesaha sawirka.
1977: Waxay siisaa sawirka midab casaan, dhalaalaya oo muuqaal ah oo liitaa iyadoo ay ugu wacan tahay soo-if-bixintan oo leh casaan casaan ah.
Waxaa ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan
Fudud: Ku xooji iftiinka sawirka leh taabasho yar oo desaturation.
Valencia: Way kululaataa oo kordhisaa muuqaalka midabaynta, yaraanta iyo siinta taabasho duug ah sawirka.
Hudson: Iyada oo dheeha qabow iyo xargaha xuddunta ah uu maareynaayo si uu u abuuro jahwareer baraf leh oo hadh weyn leh.
Kelvin: Waxay siisaa dhalaal dhalaalaya oo kordha iyo heerkul.
Lo-Fi: Ku dar hooska adag adoo adeegsanaya fadhiisinta iyo kuleylka kuleylka, sidaas darteed kobcinta midabka sawirka.
Hefe: Waxay aad ugu egtahay Lo-Fi laakiin waa riwaayado yar oo waxay bixisaa isbarbardhiga sare iyo fadhiga.
Toaster: Waxay leedahay muuqaal layaableh waxayna sababtaa bartamaha sawirka inuu gubto.
Reyes: Waxay bixisaa muuqaal boodh ah iyo goos goos ah sawirka.
Clarendon: Waxay ahayd meesha ugu horeysa saameyn keliya oo loogu talagalay fiidyowyada, tanna hadhka ayaa sii xoogeysanaya oo iftiiminaya fikradaha.
Kalasoocidda sheekooyinka Instagram
Qaahira: Waxay soo bandhigtaa muuqaal midab hurdi leh oo huruud iyo cagaar leh.
Buenos Aires: Sax codadka mugdiga ah oo kor u qaad nalalka.
Lagos: Iyada oo leh midab hurdi ah ayaa jilcisa sawirka.
Oslo: Ku kalsoon hooska.
New York: Waxay kordhisaa codadka mugdiga ah, iyadoo la abuurayo saameyn mugdi ah oo mugdi ah.
Tokyo: Waxay siisaa muuqaal madow iyo caddaan ah.
Abu Dhabi: Muuji codadka huruudda hurdi ah inta aad jilcinayso muuqaalka.
Rio de Janeiro: Waxay baabi'isaa midab guduud iyo jaalle ah oo siinaya saameyn midabbada.
Melbourne: Waxay jilcisaa sawirka halka ay yaraaneyso fadhiyada.
Jakarta: Kobcinta nalka hana siiyo cod midab leh.
Saameyn ay Instagram soo saartay tan iyo markii la abuuray
Sannadkiisii ​​ugu horreeyay waxay gaadhay tirada malyannada 27 ee adeegsadayaasha, taasoo muujisay tirakoobka taasi Waxay si dhakhso leh u noqotay mid ka mid ah barnaamijyada ay ugu jecel yihiin dad badan. Laakiin illaa bishii Maajo ee 2012 waxaa la duubay in sawirro kasta oo labaad oo ah 58 la geliyay oo hal isticmaale oo dheeri ah lagu daro dalabka, si bilyan bilyan oo sawirro ah loogu soo dhejiyo madal mar horeba la dhaafay.
Waxa kale oo jiray dhacdo soo jiidatay sumcadda Instagram, heesaha Ingiriisiga ah Ellie Goulding waxay dejisay muuqaal fiidiyoow ah Agoosto 9 ee 201, kaas oo ka koobnaa oo keliya sawirro dib ula mid ah shaandhaynta shabakaddan bulshada. Intaas waxaa sii dheer fiidiyowgu wuxuu socdaa ku dhawaad ​​daqiiqadaha 4 kaas oo in ka badan 1.200 sawirro kala duwan loo adeegsaday.
Wixii loogu talagalay 27 ee Febraayo ee 2013, waxaa lagu dhawaaqay in Instagram ay horey u lahaan jirtay in kabadan 100 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon oo tiradooda ay sii kordheysay maalin kasta. Arrintan, sanadka soo socda 300 wuxuu horey u lahaa malaayiin isticmaaleyaal firfircoon, taasi waa, ugu yaraan kororka ayaa ka muuqday 10 milyan oo isticmaale bishii. Sidaas awgeed, 2018 shabakaddan bulsheed waxay dhaaftay 1.000 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon.
Dhanka kale waxaa la qiyaasayaa in kobaca Instagram ay la xiriirto hal-abuurka joogtada ah ee lagu daro madal sannadihii la soo dhaafay.
Maanta iyo sannadihii 9 ka dib abuurista, barta Instagram waxaa loo arkaa inay tahay dalabka labaad ee ugu caansan ee loo adeegsado taleefanka isla markaana loo isticmaalo Facebook ka dib. Xaqiiqdii, tirada la xiriirta tirada isticmaaleyaasha iyo tirada sawirrada lagu dhejiyay daqiiqaddiiba shabakadda bulshada ayaa si joogto ah u kordheysa. Waana taas adduunka oo dhan Waxaad ka heli kartaa dadka maalin walba adeegsada madalkan.
Waxay u egtahay wax caadi ah in shaqsiyaad badani ay toosiyaan oo ay aadaan Instagram si ay u eegaan dhammaan wararka ka hor inta aysan bilaabin howlahooda maalinlaha ah, sida shaqada. Sidoo kale waxay dhacdaa kiiska imaatinka maalin mashquul ah oo fariiso ama jiifso si aad u daawato dhammaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin dadka iyo bogagga aad raacayso ayaa gelinaya. Sidoo kale, jawaab celinta ay isticmaaleyaasha kale u leeyihiin daabacaaddeena dib ayaa loo eegaa.
Iyo dhammaan cusboonaysiinta ay ku leedahay Instagram inay ku dhowdahay suurtagal maaha in lagu caajiso. Xaqiiqdii mid ka mid ah kuwa maalin walba la isticmaalo waa sheekooyinka, mahadsanid dabiiciga iyo isdhaxgalka ee ay soo bandhigtay shaqadan, kaas oo aad ku gali karto sawirro, sawirro iyo fiidiyooyo leh dhammaan xulashooyinka dib-u-habeynta iyo dib-u-cusboonaysiinta ee qaybtan. Dabeecad kale oo soo jiidata dareenka dad badan ayaa ah xog-ogaalnimada ay muujiso, maadaama sheekooyinkan la waayey kadib markii 24 ay dhaaftay saacado markii la daabacay.
Instagram iyo magacyada
Xaaladda lahaanshaha akoon ganacsi oo aad rabto inaad ku xirnaato isgaarsiin joogto ah iyo xayeysiinta badeecadaada, adoo aan u dooranin qaab rasmi ah, waxaad u isticmaali kartaa sheekooyinka ku yaal Instagram si aad u fiican si aad u abuurto qoraallo fudud oo aad si cad ugu gudbiso farriinta oo aad ka tarjunto waxkasta oo aad rabto Dhagaystayaashaadu waxay eegayaan astaantaada. Laakiin adigoon sameynin faahfaahin aad u faahfaahsan si aad uhesho dhagaystayaashaada, Intaa waxaa dheer in lagu siiyo awood aad ku soo geliso waxyaabo badan oo ka kooban maalin kasta oo aadan seegin koontadaada maalin kasta.
Saameeyayaashu waxay heleen caan caan ka ah Instagram, sababtoo ah codsigan Waxay ku siineysaa dhamaan aaladaha iyo suurtagalnimada inaad meelo badan gaadho hab fudud, halka qalabka kale waa inaad raacdaa taxane borotokool oo dalbanaya.
Ha ahaato iyada oo loo marayo fiidiyowyo, sawirro ama sawirro, dadkani waxay u heellan yihiin inay u soo bandhigaan nuxurka Instagram taas oo soo jiidaneysa dareenka isticmaaleyaasha fiirinaya qoraalladaada. Sidoo kale waa in la ogaadaa in ay ka mid yihiin mowduucyada loo arki karo kuwa ugu badan ee ay saameyntani saameyn ugu yeelan karto caanka ah majaajillada, dhiirrigelinta, jimicsiga iyo heesaha heesaha.
Xaaladaha badan ee saameyntani waxay ku soo caanbaxeen sumcadda iyo aqbalaadda dadweynaha in ay sameynayaan riwaayado, wareysiyo iyo saxiixyo autograph adduunka oo dhan. Laakiin guulahan ayaa ah natiijada shaqo badan iyo daraasad dhammaan daabacadaha soo ifbaxay iyo soo dhaweynta isticmaaleyaasha joojiya inay ka jawaabaan nuxurka ay ka kooban yihiin, kuwaas oo hubiya inay u ekaato muuqaal ahaan, madadaalo oo ay ilaaliso tayada iyo asalnimada
1 Barta bulshada ee Instagram
1.3 Waxaa ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan
1.4 Kalasoocidda sheekooyinka Instagram
2 Saameyn ay Instagram soo saartay tan iyo markii la abuuray
3 Maanta Instagram
3.1 Instagram iyo magacyada
3.2 Saamaynta Instagram
Markay tiraahdo Instagram firfircoon hadda